Isiokwu a atụmatụ ụfọdụ nnọọ nkịtị headphone nsogbu na nnọọ iPhone onye ọrụ nwere na ihu dịkarịa ala otu ugboro. The isiokwu na-esetịpụrụ n'elu proposing ndị kacha ngwọta na-nke ọ bụla n'ime nsogbu ndị a.
1. araparawo Ekweisi mode
Ọ bụ a na-enwekarị nsogbu na ọ fọrọ nke nta ọ bụla ọzọ iPhone onye ọrụ nwere na ihu dịkarịa ala otu ugboro. O doro anya na, iPhone apụghị ịgwa ihe dị iche n'etiti nkịtị na ekweisi mode ozugbo ị ikwụpu ekweisi esighịkwa a software glitch nke na-apụta iPhone ịlụ araparawo ekweisi mode. Iji ekweisi ndị ọzọ karịa mbụ ndị na-wee na iPhone pụkwara ime ka nsogbu a.
Ihe ngwọta a egwu nsogbu dị mfe. Jide nke a mgbe ntị nwa osisi makwaara dị ka a Q-n'ọnụ. Fanye ya na headphone Jack wee wepụ ya. Tinyegharịa usoro 7 na 8 ugboro na dịtụ eju anya, ndị iPhone ga-rapaara na headphone mode ọzọ.
2. unyi Headphone Jack
Unyi headphone Jack na-arụpụta a otutu audio nsogbu dị ka onye tụlere n'elu. O nwekwara ike gbanyụọ ụda na gị iPhone nke nwere ike ịbụ nnọọ manụ. The unyi ịkpaghasị audio ọrụ nke iPhone nwere ike ma-eme naanị ájá ma ọ bụ na ụfọdụ ọ pụrụ ịbụ lint ma ọ bụ ọbụna a obere mpempe akwụkwọ. Isi ihe na-n'idozi nsogbu Otú ọ dị, bụ ịnọgide na-ejide onwe ha. Ọtụtụ n'ime anyị na-eche na ha n'ụzọ ụfọdụ bibiri ha iPhones na-agba ọsọ ka kacha nso arụzi ma ọ bụ Apple ụlọ ahịa, mgbe nsogbu a ga-edozi n'ime sekọnd n'ụlọ.
Jiri a agụụ Cleaner na a sooks mmasị na ya ma na-edebe ndị sooks abụghị nke ọdịyo Jack nke iPhone. Tụgharịa ya na ka ọ na-eme ndị ọzọ. Ọ bụrụ na Otú ọ dị, ụdị unyi na anyị na-emeso bụ lint, na-eji a nha nha ghota nlezianya ọkọ ya nke ọdịyo Jack.
3. Headphone Jack na mmiri n'ime
Mmiri nwere ike ime ka a otutu nsogbu na audio Jack dabere n'elu larịị nke mmiri ọdịnaya. Site na-ejere ọdịyo Jack fọrọ abaghị uru na-nkịtị glitches ke ọdịyo ọrụ, mmebi dịgasị iche n'ebe otu ikpe ọzọ.
Jiri a draya ntutu nkụ ọ bụla mmiri n'ime headphone Jack site ịtụkwasị ntutu draya nri na ncherita-ya.
4. nnukota onu Headphone Jack
Nnukota onu headphone nwere ike ịbụ N'ihi nke na-eji ekweisi ndị ọzọ karịa mbụ ndị mgbe mgbe ụfọdụ ọ nwere ike mere ruru ka a software malfunction. Nsogbu a nwere ike ịkpata enweghi ịnụ ihe ọ bụla na iPhone nakwa dị ka ọdịda ịnụ ụda na iji ekweisi onwe ha.
Itinye ma ikwụpu gị mbụ ekweisi na bịara na iPhone ọtụtụ ugboro. Ọ ga-enyere ngwaọrụ aghọta ihe dị iche n'etiti nkịtị na ekweisi mode na ọ ga-abịa nke si nnukota onu headphone Jack ala.
5. Mpịakọta Nsogbu ruru Headphone Jack
Olu nsogbu na-ezo aka enweghi ịnụ ọ bụla ụda si audio ọkà okwu nke iPhone. Ndị a na-mere ukwuu n'ime ruru ka buildup nke n'akpa uwe lint n'ime headphone Jack. Ụfọdụ Commons mgbaàmà nke nsogbu na-agụnye enweghi ike ịnụ click ụda mgbe Ịkpọghe iPhone na enweghị ike na-egwu music site audio ọkà okwu wdg
Gbagọrọ agbagọ otu ọgwụgwụ nke a paperclip na-eji ya ọkọ si na lint si n'ime gị ekweisi Jack. Ka ojiji nke a tọọchị hụrụ na lint n'ụzọ ziri ezi ma na-eme ka n'aka na ị na-adịghị emebi ọ bụla nke ndị ọzọ ekweisi Jack components na usoro.
6. etịbede ke music na-egwu egwu na ekweisi na
Nke a kama nkịtị na nsogbu mgbe eji ọzọ ekweisi. Nke a bụ n'ihi na eziokwu na ndị ọzọ ahụ ekweisi ukwuu n'ime ada iji nye snug adịgide chọrọ site ekweisi Jack ka ịgbakwunye n'ụzọ zuru okè. Nke a na-oge izu na music nke iyi na-mma mgbe ekweisi 'waya e nyere a nwayọọ shake ma nsogbu na-abịa azụ mgbe a mgbe.
Ihe ngwọta bụ kama mfe; adịghị eji atọ akụkụ ekweisi. Ọ bụrụ na ị n'ụzọ ụfọdụ mebiri emebi ndị bịakwutere gị iPhone, ịzụta ndị ọhụrụ site na Apple ụlọ ahịa. Ịzụta na Apple arụpụtara ekweisi iji na gị iPhone.
7. Siri interrupting erroneously mgbe ekweisi plugged na
Nke a bụkwa nsogbu na edemede ruru ka ojiji nke ọzọ ekweisi na a rụrụ kwesịrị ekwesị na ekweisi Jack. Ọ bụla ije, dị otú ahụ ikpe na-eme ka Siri-abịa ma na ịkwụsịtụ ihe ọ bụla ị na e egwu na eme site na ekweisi.
Dị ka a kọwara na mbụ, iPhones agbasaghị-eme nke ọma na Apple arụpụtara ekweisi. Ya mere, jide n'aka na ị ịzụta ezi Apple ekweisi bụrụ na ị na imebi ma ọ bụ idejo ihe ndị bịakwutere na ngwaọrụ gị.
8. Sound nanị na-akpọ site n'otu nsọtụ ekweisi
Nke a nwere ike ịpụta ihe abụọ; ma ekweisi na ị na-eji na-emebi ma ọ bụ na e nwere bukwanu ego nke unyi n'ime gị ekweisi Jack. The mgbe e mesịrị na-akpata ekweisi inwe a tọpụ kwesịrị ekwesị n'ime Jack mere dapụtara na ụda egwu na-akpọ site n'otu nsọtụ ekweisi.
Nyochaa ekweisi Jack maka ụdị unyi na ebute nsogbu na iji a tọọchị. Mgbe ahụ dabere n'elu ụdị nke unyi, ie ájá, lint ma ọ bụ akwụkwọ ibe, eji kwekọrọ ekwekọ nzọụkwụ kwuru n'elu tufuo ya.
> Resource> iPhone> 8 Common iPhone Headphone Nsogbu na Solutions